I-Double Suite - I-Pousada Recanto de Praia Seca - I-Airbnb
I-Double Suite - I-Pousada Recanto de Praia Seca
Igumbi lakho lokulala e indlu engasemva sinombuki zindwendwe onguMarcelo
I-double Suite yethu ine-TV, i-minibar, umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, amagumbi okuhlambela aneshawa eshushu, ezinye izinto nefenitshala. Ibhedi nezinto zebhedi zokuhlamba ziqukiwe. Ezinye iindawo ezilala abantu ababini zineBhalkhoni Neendawo Zokufikeleleka. Hlola Iinkcukacha Zendlu!
E-Pousada Recanto de Praia Seca, uza kufumana indawo yokuphumla yeTV, igumbi lokuhlala, indawo yokufunda eneencwadi ezitshintshiweyo, indawo yokwamkela iindwendwe, indawo yokutyela, indawo yokuphumla kwii-hammock, ipuli, ingca enkulu, phakathi kwezinye iindawo zempilo nezolonwabo kulo mmandla ngokwawo. Indawo yethu ilungele usapho ibe ineeflethi ezilishumi elinanye ezifumanekayo, ezinamagumbi aliqela, ezinomoya otyibilikayo, ezilula kodwa ezitofotofo. Yindawo entle kwabo bafuna ukuthi zava, uxolo nokuzola kufutshane nendalo.
I-Dry Beach iququzelela imisitho emininzi yezemidlalo ngo-2010, njenge-windsurfing kunye ne-canoeing, itsala abakhenkethi abaninzi kule ndawo. Namhlanje sesona sithili siphambili eAraruama for Tourism, ibe nyaka ngamnye sityelelwe ngamawaka abakhenkethi abasuka kwilizwe lonke nasehlabathini, ngokukodwa ngamaxesha onyaka: iKrisimesi (ngoDisemba), Usuku olungaphambi koNyaka Omtsha (ngoDisemba nangoJanuwari) kunye neCarnival (ngoFebruwari).
Sikhona ukuze siphendule nayiphi na imibuzo ngoxa sisamkela iindwendwe size sibonise iindawo zokuzonwabisa onokukhetha kuzo kwingingqi yethu.